21.Jump.Street. (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး ~ ဘလော့ခရီးသည်
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2012 ခု နှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ 22 Jump Street ဇာတ်ကားဟာ IMDb Rating 7.2 အထိရရှိထားတဲ့ရဲ ဟာသ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ အထူးသရုပ်ဆောင် တင်ဆက်ပြသထားတဲ့ ဇာတ်ကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်.။ဒီဇာတ်ကားလေးမှာတော့ မှာတော့ ကျောင်းတုန်းက မတည့်တဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ကျောင်းပြီးလို့ရဲထဲဝင်တဲ့အခါလည်း အလုပ်အတူတူတွဲလုပ်ရင်း ထူးခြားတဲ့အမှုအတွက် ကျောင်းပြန်တက်ရပြန်ပါတယ်..ကျောင်းတက်ရင်းဘယ်လိုတလွဲတွေနဲ့ အမှုလိုက်ကြမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရမှာပါ။ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ဖန်တီးထားတဲ့နေရာမှာလည်းသေသပ်သလို ဟာသလည်းမြောက်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဇာတ်ကားလေးကတော 22.Jump.Street.(2014 ) ခုနှစ်အတွက်လည်း အဆက်ဇာတ်ကားလေး ကိုပါ တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြည့်ရသေးသူများ အလွယ်တစ်ကူ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်၊ ဒေါင်းယူနိုင်ရန် အတွက်လည်း အကောင်းဆုံး တင်ပေးထားပါတယ်။ယခုဇာတ်ကားကိုဒေါင်းလော့ရယူရန် နှင့်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုသူများအောက်က Download Watch Movies ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်.။
Download Watch Movies Download Watch Movies လင်းစွယ်စုံ(နည်းပညာမျှဝေခြင်း)